စကျတငျဘာ 2018 – Healthy Life Journal
ကာလသားရောဂါကို မကုသရင် ဘာဖြစ်တတ်သလဲ . . .
မေး. ကာလသားရောဂါပိုးကို အချိန်မီမကုသပါက နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာနိုင်တာတွေကို သိချင်ပါတယ်။ ကိုလင်းထွန်း၊ ချောက်မြို့။ ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. လိင်ကနေ ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေကို ခြုံပြီး ကာလသားရောဂါလို့ ပြောလိုက်တာပါ။ ကာလသားရောဂါဆိုတာ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဆစ်ဖလစ်ရောဂါဆိုတာ အချိန်မီကုဖို့လိုတယ်။...
အပြင်ထွက် အလုပ်လုပ်ရသူများ အပူကြောင့်နာမကျန်းမှုမဖြစ်စေရန် သတိထားစရာများ
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) (၁) နေပူဒဏ်ခံနိုင်ဖို့ ချည်သားပွပွ လက်ရှည်အင်္ကျီ၊ ဘောင်းဘီရှည်ဝတ်သင့်ပါတယ်။ (၂) လတ်ဆတ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များများစားပေးပါ။ နေဒဏ် ကာကွယ်နိုင်အောင် ခရမ်းချဉ်သီးဟင်းလျာ စားပေးပါ။ (၃) ရေများများသောက်ပေးပါ။ ချွေးထွက်များလွန်းရင် ဓာတ်ဆားရည်ကို သောက်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့။ ရေခဲရေ...
ဒူးနာနေတယ် . . .
မေး. ကျွန်မအမေက ၀ပါတယ်။ ၀လည်းဝတော့ လှေကားအတက်အဆင်းလုပ်ရင် ဒူးနာတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒူးနာတာသက်သာအောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲရှင့်။ Hunny (FB) ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ၀လာတာနဲ့အမျှ လမ်းလျှောက်များတာ၊ လှေကားအတက်အဆင်းလုပ်တာ များတာတွေကြောင့် ဒူးနာတတ်ပါတယ်။ အထပ်မြင့်မှာ နေရတဲ့သူတွေက...
လမ်းလျှောက်နှေးသူများ နှလုံးရောဂါနှင့် သေဆုံးနိုင်ခြေများ
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ လက်ဆက်စတာတက္ကသိုလ်မှ သုတေသီတွေက လူ ၄၂၀၇၂၇ ယောက်တို့ရဲ့၆ နှစ်တာကာလအတွင်း သေဆုံးနှုန်းကို စူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ ရလဒ်အဖြစ် လမ်းလျှောက်နှေးသူတွေက ကမ္ဘာ့လူသေဆုံးမှုအများဆုံး နှလုံးရောဂါနဲ့ သေဆုံးနိုင်ခြေအလားအလာ ၁ ဒသမ ၈ နဲ့ ၂...
စွမ်းအင်တိုးစေမည့် အရသာရှိသော သရေစာ ရှစ်မျိုး
သရေစာ စားချင်ရင် အဆီအအိမ့်တက်ပြီး အာဟာရနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အစာတွေ အစား စွမ်းအင်တိုးစေမယ့် သရေစာတွေကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့- – ဒိန်ချဉ်၊ – ပန်းသီး၊ – ငှက်ပျောသီးနဲ့ မြေပဲထောပတ်၊ – ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ – သစ်သီးခြောက်နဲ့...
ကြို့ထိုးခြင်း သက်သာစေမည့် အဆင့် ခုနစ်ဆင့်
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) လူအများကြားမှာ ရုတ်တရက် ကြို့ထိုးတဲ့အခါ ကြို့ထိုးတာကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ နည်းအမျိုးမျိုး သုံးရပါတော့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ လွယ်လင့်တကူ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ ကြို့ထိုးသက်သာစေမယ့် နည်းတွေကို ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။ အဆင့် (၁) သင့်လက်များကို အသုံးပြုပါ လက်တစ်ဖက်ရဲ့...
ခြေထောက်နှိပ်နယ်ခြင်း၏ ကောင်းကျိုး ၅ ရပ်
(၁) ခြေထောက်နာကျင်မှုကို သက်သာစေပါတယ်။ (၂) ခြေထောက်သွေးလှည့်ပတ်မှုကို အားကောင်းစေပါတယ်။ (၃) ခြေထောက်ကို အားပြည့်စေပါတယ်။ (၄) အာရုံကြောဆိုင်ရာ ရောဂါဝေဒနာရှိသူတွေမှာ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ (၅) စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ နုံးချည့်ညောင်းညာတဲ့ ဝေဒနာကိုသက်သာစေပါတယ်။ ဘယ်လိုနှိပ်နယ်ရမလဲ အိပ်ရာမ၀င်ခင် ခြေထောက်ကို ကြက်သီးနွေး...